China RF 8.2Mhz EAS Dome Middle Dome miaraka amina mpanamboatra sy mpivarotra Tag Retail Security-Dome | Etagtron
RF Afovoany Dome mafy tag Fanaraha-maso Security Alarobia sensor
①Mora ampiasaina sy esorina. Kely sy azo ahodina. Samy hafa habe sy loko ho an'ny safidinao. (R45mm, R50mm, R64mm)
②Mifanaraka amin'ireo rafitra 8.2MHZ rehetra. Azo ampiharina amin'ny fivarotana antsinjarany toy ny akanjo, poketra sns.
③Fanoherana fanoherana avo lenta. Fahombiazana amin'ny fahitana tsara.
Antsipiriany lehibe momba ny tag RF mafy-Mini Dome:
1.Toro sarotra, ampiharina be amin'ny fivarotana lehibe sy fivarotana hiarovana fitafiana halatra avo isan-karazany, manana tombony lehibe amin'ny famaritana tsara ny rafitra EAS, azo averina ary mora ampiasaina sns.
Fandidiana 2.Easy sy endrika mahasarika, henjana, azo antoka ary azo ampiasaina indray, kalitao tsara amin'ny vidin'ny fifaninanana;
3.Ny mariky ny mpanjifa dia azo atao pirinty amin'ny tag toy ny fitakiana R&D anao ary manavao fomba vaovao.
ABS ambony kalitao + coil fahatsapana avo + hidin-tsanganana vy
Ny fanontana tsy tapaka dia volondavenona, mainty, fotsy ary loko hafa, afaka manamboatra ny logo.
Ny habe sy ny fomba tsy mitovy amin'ny safidinao.
Vonoina ny tag miaraka amin'ny mpamadika RF 8.2MHz.
♦Ny antena RF dia afaka miasa amin'ny fomba maromaro mifototra amin'ny fampiasana teknolojia voadio na voadio.
Amin'ny fampiasana ny teknolojia Swept RF, mpandeha an-tongotra iray no miasa amin'ny alàlan'ny fandefasana, mandefa signal. Raha misy mari-pamantarana na marika tsy mitongilana tonga eo amin'ny manodidina ny mpandeha an-tongotra dia hanako izy io ary izany dia hitan'ny mpandeha an-tany faharoa izay mpandray. Haneno ny fanairana avy eo.
♦Raha miaro ny vavahady malalaka ianao, dia azo ampiasaina ny mpandeha an-tongotra efa voadio na voadio, arakaraka ny sakan'ny vavahady ambenana.
Teo aloha: RF 8.2Mhz EAS Mini Dome Tag Miaraka amin'ny Pin Retail Security Tag-Mini Dome
Manaraka: Fivarotana fitafiana EAS System Manohitra ny fangalarana Magnetic Security Tag Hard Tag-Pencil Tag miaraka amin'i Lanyard
EAS System RF EAS 8.2mhz RF Security Supermarke ...